Nokia 5.1 Plus Black (3GB/32GB) ~ ICT.com.mm
HomeNokia 5.1 Plus Black (3GB/32GB)
Mediatek MT6771 Helio P60 Chipset, Octa-core CPU, RAM 3GB နှင့် Internal Storage – 32GB တို့ကိုတပ်ဆင်ထားသည့် Nokia 5.1 Plus စမတ်ဖုန်း (အနက်ရောင်) ဖြစ်သည်။ နောက်ကျောဘက်တွင် 13 MP ရှိ ကင်မရာတစ်လုံး တပ်ဆင်ထားပြီး ရှေ့ဘက်တွင် 8MP ရှိ Selfie ကင်မရာကို... [Learn more]
Brand: NokiaSKU: 130642N/ASee more: Mobile Phones, New Arrivals, Nokia, Products, ShopFilter by:
Mediatek MT6771 Helio P60 Chipset, Octa-core CPU, RAM 3GB နှင့် Internal Storage – 32GB တို့ကိုတပ်ဆင်ထားသည့် Nokia 5.1 Plus စမတ်ဖုန်း (အနက်ရောင်) ဖြစ်သည်။ နောက်ကျောဘက်တွင် 13 MP ရှိ ကင်မရာတစ်လုံး တပ်ဆင်ထားပြီး ရှေ့ဘက်တွင် 8MP ရှိ Selfie ကင်မရာကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ 5.8” ရှိ Screen မှာ LCD Touchscreen အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Resolution မှာ 720×1520 pixels ဖြစ်သည်။ ဘတ္ထရီပိုင်းတွင် 3060 mAh ရှိသည့် Battery ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ OS ပိုင်းတွင် Android 8.1 (Oreo) (Android 9.0 အထိတိုးမြှင့်နိုင်) အသုံးပြုထားသည့်အတွက် ဖုန်းအသုံးပြုခြင်း၊ Video ကြည့်ရှုခြင်း နှင့် Apps အသုံးပြုမှုများအတွက် ပေါ့ပါးမြန်ဆန်စေမည်ဖြစ်သည်။
Display: 5.8 inches IPS LCD Capacitive Touchscreen, Resolution: 720 × 1520 pixels, Chipset: Mediatek MT6771 Helio P60, CPU: Octa-core, GPU: Mali-G72 MP3, Operating System: Android 8.1(Oreo),upgradable to Android 9.0, RAM: 3GB, ROM: 32GB, Rear Camera: 13 MP, Front Facing Camera: 8 MP, Battery: 3060 mAh Non-removable Li-Ion, SIM: Dual SIM(Nano-SIM,dual stand-by)
The power ofaphone lies in its battery. The phone featuresa3060 mAh Li-Ion battery for more juice and power in your phone. Enjoy more out of your phone with the battery that comes with the Nokia 5.1 Plus.
Total price:K266,000 K252,200
This item: Nokia 5.1 Plus Black (3GB/32GB) K209,000